Al-shabaab keessatti kan akka bulchaa Moqdishootti ramadamee riphxee-loltummaan socho’u – haleellaa humna qilleensaa Yunaayitid Isteets geggeessiteen ajjeesamuu isaa – Qondaalli Ministara Ittisaa Yunaayitid Isteets Raadiyoo Sgalee Ameerikaaf mirkaneessee jira.
Alii Jabal – jedhamuun kan waamamu – Alii Mohammed Huseen, akka daldaltoonni magaalaa Moqdshoo keessaa garee Al-shabaabiif maallaqa baasan dirqsiisuudhaan beekama.
Waaltaa Ajaja waraanaa Yunaayitid Isteets, kan Afrikaa keessaa “US Africa Command” jedhamu irraa ibsi gabaabaan kenname akka jedhutti, akka lakkoobsa sa’aatii Yunaayitid Isteetsitti, Sanbata dabre kana, waaree booda geggeessame – haleellaan sun.
Ibsi bahe sun akka jedhutti, haleellaan sun, waahiloota naannoo sanaa wajjiin qindeessuun ka geggeessame yoo tahu, gochaalee Al-shabaab dhiheenya raaw’ate kan humna waraanaa Somaaliyaa irratti illee haleellaa geggeessuu isaa of keessaa qabuuf deebii kennuuf ka geggeessame.
Halellaan sun konkolaatota lama qondaalonni garee finxaaleyyii sun ittiin imalanitti xiyyeeffachuun ganda Buula-Baiin, ka Tortorootti argamtu keessatti geggeessamuun isaas himamee jira.